Haddii lacagi kaa lunto | Somaliska
Ka waran haddii lacagi kaa lunto? tusaale ahaan haddii ay kaa lunto lacag ku dhow 15,000kr sidee dareemi lahayd? habeenkaas ma aadan seexateen? ka waran haddii lacagta ay deyn ahayd, soo kama sii darna? Hadaba qisadaan waxay ku dhacday wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaaladeena. Lacagtii ayaa wiilka waxaa u helay mid ka mid ah shaqaalaha dukaanka LIDL oo xitaa isku dayay in uu soo waco balse aysan u suurto galin. Wiilka ayaa tagay dukaanka LIDL si uu isaga waydiiyo balse shaqaalahaas ayaa lacagtii gudoon siiyay wiilka ayadoo dhamaystiran. Hadaba maxaa la gudboon qofkaas lacagta ay ka luntay, sidee ugu mahadcelinayaa qofka daacada ah ee lacagtaada kuu ilaashay? Aad iyo aad ayay u yartahay waqtigaan la joogo in la helo qof sidaas u wanaagsan oo ilaahey ka cabsanaya ama haddii uusan Muslim ahayn bani'aadanimo ku jirto. Dhaqanka caadiga ah waa in qofkaas aad siiso abaalgud tusaale ahaan in aad lacagta wax ka siiso ama hadiyad kale aad gudoonsiiso. Balse wiilka ay lacagta ka dhuntay intaas midna ma uusan sameyn, ma farxadii ayaa ka tanbadisay mise baqiilnimo ayaa gashay? Muhiim ma ahan in aad qofka lacag ku abaal mariso balse waxaa muhiim ah in aad u muujiso mahadcelintaada. Waa xasuusin oo keliya.
Ka waran haddii lacagi kaa lunto? tusaale ahaan haddii ay kaa lunto lacag ku dhow 15,000kr sidee dareemi lahayd? habeenkaas ma aadan seexateen? ka waran haddii lacagta ay deyn ahayd, soo kama sii darna? Hadaba qisadaan waxay ku dhacday wiil dhalinyaro ah oo ku nool magaaladeena.
Lacagtii ayaa wiilka waxaa u helay mid ka mid ah shaqaalaha dukaanka LIDL oo xitaa isku dayay in uu soo waco balse aysan u suurto galin. Wiilka ayaa tagay dukaanka LIDL si uu isaga waydiiyo balse shaqaalahaas ayaa lacagtii gudoon siiyay wiilka ayadoo dhamaystiran. Hadaba maxaa la gudboon qofkaas lacagta ay ka luntay, sidee ugu mahadcelinayaa qofka daacada ah ee lacagtaada kuu ilaashay? Aad iyo aad ayay u yartahay waqtigaan la joogo in la helo qof sidaas u wanaagsan oo ilaahey ka cabsanaya ama haddii uusan Muslim ahayn bani’aadanimo ku jirto.
Dhaqanka caadiga ah waa in qofkaas aad siiso abaalgud tusaale ahaan in aad lacagta wax ka siiso ama hadiyad kale aad gudoonsiiso. Balse wiilka ay lacagta ka dhuntay intaas midna ma uusan sameyn, ma farxadii ayaa ka tanbadisay mise baqiilnimo ayaa gashay?
Muhiim ma ahan in aad qofka lacag ku abaal mariso balse waxaa muhiim ah in aad u muujiso mahadcelintaada.
Waa xasuusin oo keliya.
January 27, 2011 at 19:52
asc hadaan wax ka dhaho arintaa ayaa waxaan is orankaraa marka hore lacagta qofka helay waxaa u furan in diin ahaan oo ka weydiisto baadi fur 100%1 100%5 inta oo awoodo ninka iska leh xoolaha ok masameyn lacagtii waa oo dhibay oo wa agudoon siiyay ninka xoolaha iska leh waxaa u furan labo wado in oo wax kasiiyo lacagta madaa loo qabtay lana gudoon siiyay ok waxba kama siin sax .. waxaa lagu leyay hay in oo u mahad noqo oo ku dhahay mahadsanid thnx . intaa wixii dher waxaa la oran karaa farxada lacagtii oo rumesan waayay dib u helida oo u helaysidaa darted lacagtii inta oo kumashqulsanaa si aaysan markale uga lumin kkkkkkkkkkkkk in oo iloobay wax walbo oo xaq ah oo u lahaa ninkaa weli fursad ayuu heystaa oo ugu laabto ruuxii lacagta gudoon siyay mahadsanidiin dhamaan tiin waxaan ku deraa mid kale madama oo helay ninka dukaanka shaqalaha ka ah ma qadan karo marka loo fiirsho hormarka casriga ah e lagaray aduunka maxa yelay dukamanka kamiro ayaa ku xiran ma sahlano in la qato xolo dad liiyihiin no way marlabad mahadsanidiin